Kun Askari oo ka tirsan ciidamad AMISOM oo dhowaan dalka ka baxaysa - Jowhar Somali news Leader
Home News Kun Askari oo ka tirsan ciidamad AMISOM oo dhowaan dalka ka baxaysa
Kun Askari oo ka tirsan ciidamad AMISOM oo dhowaan dalka ka baxaysa
Madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Amb Francisco Madeira ayaa sheegay in Bisha February ee sanadkan ay Soomaaliya ka baxayaan 1,000 Askari oo ka mid ah Ciidanka AMISOM ee howlgala Gobolada Soomaaliya.
Mr Madeira, ayaa sheegay in kunka Askari ee ka socda AMISOM lagu beddelayo kun Askari oo Soomaali ah kuwaas oo tababarkooda iyo qalabkoodaba loo dhameystiray.
Qorshaha kala guurka ah ee AMISOM ay guud ahaan dalka uga baxeyso dhamaadka 2021 ayaa waxaa uu soo billowday sanadkii 2018kii markaas oo Ciidamadii ugu horreeyay ay ka baxeen Soomaaliya.
Dowladaha qaar ee ay Ciidamada ka joogaan AMISOM ayaa ka soo horjeeda qorshaha bixitaanka AMISOM waxaana waddamadaas ka mid ah Kenya iyo Uganda,oo la aaminsanyahay in dhaqaalo badan uga soo xarooda howlgalkooda Soomaaliya.
Madaxweynayaasha labada dal ee Kenya iyo Uganda waxaa ay horay u sheegeen in xitaa haddii uu dhamaado howlgalka AMISOM aysan Ciidamadooda la baxeyn inta ay jirto qatarta Al-shabaab oo weeraro ka gaysta Gobolka Geeska Afrika.
Waxaa ay ku doodayaan in Dowladda Soomaaliya aysan xilligaas diyaarsan karin ciidamo la wareega amaanka dalka, iyaga oo Qaramada Midoobey iyo Midowga Yuruna ka codsaday in aysan joojin dhaqaalaha ay ku bixiyaan Soomaaliya.
Howlgalka AMISOM oo soo billowday Bishii March 2007dii ayaa waxaa bisha March ee sanadkan u buuxsameysa sanadkiisa 14aaad,waxayna ku guul dareysteen in ay Al shabaab ka saaraan Soomaaliya,oo aheed Muhiimada ay dalkaan ku joogeen.
Dowlada Faderaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u diyaar garoobayso buuxinta Saldhigyada ay ka baxaan Ciidanka Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya.